Introduction to PT International Co.,Ltd (Myanmar)
No.128, Kanaung Minthar Gyi Road, East Dagon Industry Zone, Yangon, Myanmar
> Introduction to PT International Co.,Ltd (Myanmar)
> KAZANCI Holding & Group Companies
>> AKSA Power Generation
> PERKINS Powered
> CUMMINS Powered
> MITSUBISHI Powered
> AKSA Powered
> ATS (Automatic Transfer Switches)
>> e-Cosmic Institutional Chemical
> Before Sales Services
Explore our Exclusive Products
The Leading Quality Power Generator Distributor in Myanmar, Power Generation Myanmar | PT InternationalPT International Company Limited (Power Generation) | MyanmarIntroduction to PT International Co.,Ltd (Myanmar)
၁။ ကျွန်တော်များ PT International Co.,Ltd. မှ ဤစာနှင့်အတူမိတ်ဆက် တင်ပြခွင့်ရသည့်အတွက် လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
၂။ ကျွန်တော်များ PT International Co.,Ltd. မှ လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော အရံလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကဏ္ဍကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန် စွမ်းအားပြည့်အသုံးဝင်သည့် Turkey နိုင်ငံ၏ AKSA Generator (လုပ်ငန်းသုံးမီးစက်ကြီး) များကို မိတ်ဆက် တင်ပြလိုပါသည်။
(၁) ကျွန်တော်များ PT International Co.,Ltd. သည် Stallion Lubricants အမှတ်တံဆိပ် စက်ဆီချောဆီများအား တင်သွင်း ဖြန့်ချိလျက်ရှိသော Ye Yint Co.,Ltd. ၏ လုပ်ငန်းခွဲကုမ္ပဏီ (Subsidiary) ဖြစ်ပါသည်။
(၂) PT International Co.,Ltd. သည် AKSA Power Generation ကုမ္ပဏီကြီးမှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Authorized Distributor အဖြစ် AKSA Generator များအား (16kVA မှ 2250kVA)အထိ တင်သွင်းဖြန့်ချိလျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
(၃) AKSA Generator များသည် ဥရောပစံချိန်စံညွန်းမီ ကမ္ဘာ့နံပါတ်(၅)အဆင့်ရှိပြီး Singapore နိုင်ငံ၏ထုတ်ကုန် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရရှိထားပါသည်။
(၄) ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ Cummins, Perkins, Aksa အစရှိသည့် Engine များ၊ STAMFORD, AKSA အစရှိသည့် Alternatorများအပြင် Control Panel ကို Deep Sea Control Panel အမျိုးအစားများကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားပါသည်။
(၅) ကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာများ၊ပညာရှင်များနှင့် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏကို တွက်ချက်ပေးပြီး၊ သင့်လျော်သည့် မီးစက်အမျိုးအစား နှင့်အရွယ်အစားကို အကြံပြုခြင်း၊ အသုံးပြုနည်းသင်ပြပေးခြင်း၊ အချိန်မှန်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းများ စသည့် ဝန်ဆောင်မှု များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Auto Transfer Switch & Synchronization များကိုခောတ်မှီနည်းပညာများဖြင့် Customer များစိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေး လျှက်ရှိပါသည်။
(၆) ဥရောပအရည်အသွေးမှီစက်များဖြစ်၍ ဆီစားသက်သာခြင်း၊ အင်ဂျင်အပူချိန်ကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း၊ အသံဆူညံမှုများအလွန် နည်းပါးခြင်း (95dB)၊ စက်မောင်းနှင်နေစဉ် လည်ပတ်မှုများကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှူ့ စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ စသည့် Performance များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
(၇) လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတွင် AKSA Generator များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ အချိန်ကြာရှည် သုံးစွဲနိုင်ခြင်းလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်းစသည့် စွမ်းအားများရှိပြီး အချိန်မှန်ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးပေးမှုကြောင့် ပြင်ဆင်စရိတ် သက်သာခြင်း၊ လုပ်ငန်းအတွက် အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေခြင်း စသည့်အကျိုးများရှိစေပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုတက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါသည်။
၃။ သို့ပါ၍ ကျွန်တော်များ PT International Co.,Ltd. မှတင်သွင်းဖြန့်ချိသော AKSA Generator များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း လှိုက်လှဲစွာ ဖိတ်ခေါ် ကြိုဆိုအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်- အမှတ်(၁၂၈)၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုံ၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း၊ ၀၉- ၇၃၁၁ ၈၃၆၇ ၊ ၀၉-၄၂၀၀ ၇၈၉၇၀
PT International Company Limited (Myanmar)
PT International Company Limited (A Leader in Power Generator Distribution), established in June 2012, is headquartered in Yangon, Myanmar. AsaLocal Leader in the standby Power Systems Industry, PT International has brought our Manufacturing Strengths to Myanmar in order to be the high Quality and Competitive Price Leader within our Market Segment.
No.128, Kanaung Minthar Gyi Road, East Dagon Industry Zone 11451, Yangon, Myanmar
Copyright © 2012-2018 PT International Company Limited (Myanmar). All Rights Reserved.